ဆွာချောင်း တံတားတိုင်အခြေ ရေအောက်ဂလိုင် ၄ ဒသမ ၂ မီတာ(၁၄ ပေနီးပါးခန့်) ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းအား ဆက်? - Yangon Media Group
ရေတာရှည်၊ စက်တင်ဘာ ၁
ရေစီးကြောင်း၏ ပြင်းထန်မှုကြောင့် ၀ဲဂယက်ထပြီး တိုင်အခြေရှိရေအောက်ဂလိုင်မှာ (၄.၂) မီတာအထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကို သြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့ ညဦးပိုင်းမှ စတင်၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ နယ်မြေခံတပ်ရင်း (၃) ရင်းမှ တပ်မတော်သားများ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများစုပေါင်း၍ ကျောက်ကြီးများ ထည့်ထားသည့် သံဇကာခြင်းများကို အဆိုပါရေအောက်ဂလိုင်များအတွင်းသို့ ဆက်တိုက်ထည့်သွင်းခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၆) နာရီတွင် ဂလိုင်များ၏ sounding အခြေအနေတိုင်းတာမှုအရ ယခင် (၄.၂) မီတာမှ (၁.၂) မီတာသာကျန်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက် (၇) နာရီခန့်မှစ၍ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း ၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်လမ်းအပိုင်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၆၅/၄) နှင့် (၁၆၆/၀) ကြား(၄) ဖါလုံခန့်တွင် ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲ ကျိုးပျက်မှုကြောင်း ယင်းဘက်မှစီးဆင်းလာသော ရေများကြောင့် လမ်းပေါ် ရေ (၂) ပေခန့်ရေကျော်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ဆွာချောင်းတံတားဘက်ခြမ်း တံတားတိုင် RP7နှင့် RP5တို့သည် တစ်ပေခွဲခန့်နိမ့်ကျသွားခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၂၉ ရက် ညနေ (၅) နာရီ ရေငြိမ်သွားသောအချိန်တွင် ရန်ကုန်- နေပြည်တော် အမြန်လမ်းအပိုင်း ဆွာချောင်းတံတား နိမ့်ကျသွားသောတိုင်နံပါတ် (၅) (RP-5)နှင့် တိုင်နံပါတ် (၇) (RP-7) တို့၏ Upstream နှင့် Downstream တို့ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပညာရှင်များက Echo-sounder များဖြင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရေငုပ်သမားများဖြင့်ရေငုပ် တိုင်းတာခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ ရေစီးကြောင်း၏ ပြင်းထန်မှုကြောင့် ၀ဲဂယက်ထပြီး တိုင်အခြေရှိရေအောက်ဂလိုင် မှာ (၄.၂) မီတာ(၁၃.၇၇ ပေခန့်)အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းတာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒဂုံတောင် ရှမ်းတဲကြီးရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ နွေရောက်တိုင်း ညစ်ညမ်းရေသာ သုံးစွဲနေရဟုဆို
လူနေရပ်ကွက်များအတွင်း ဆောက်လုပ်ထားသော ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များ၏ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပတ်သတ်?
ငမိုးရိပ်ချောင်းအတွင်းသဲတင်စက်လှေ နစ်မြုပ်၊ တစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေ
တရုတ် စစ်တပ်သည် ဒေသတွင်း မတည်မငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေကြောင်း ထိုင်ဝမ် သမ္မတပြောကြား